Ibhola ekhatywayo/i-Soccer Academy Scholarships
Utyalo-mali kunye noRhwebo
Yintoni uRhwebo lweCross-Border?
Eli phepha limalunga ne: What is Cross-Border Trading? Isebenza njani ukuRhweba kwiBorder. Ukurhweba ngapha kweMida. Ukuqinisa intsebenziswano yengingqi. Ixabiso okanye Umahluko weXabiso/I-Arbitrage yokuRhweba kuMda weBorder: Inkcazo “Urhwebo olunqumla imida lukuvumela ukuba urhwebe kwiindawo zentengiso zehlabathi ngaphezulu kwamashishini okhuphisana nawo kunye neemali zalapha ekhaya. Ikwabonelela ngeendlela ezahlukeneyo zokurhweba. "Abatyali-mali ababandakanyekayo ... Funda ngokugqithisileyo
iindidi Ibhola ekhatywayo/i-Soccer Academy Scholarships, Utyalo-mali kunye noRhwebo
Yintoni i-Corporate Treasury
Kweli phepha lewebhu, siza kuxoxa Yintoni i-Corporate Treasury? Yinkampani esekwe ukuba iphathe, kwaye ilawule imingcipheko, iimali, imali eyinkunzi, oovimba, kunye nezixhobo ezininzi zokuhamba ngokuhambelana neenkqubo zayo zexesha elifutshane kunye nexesha elide. Ukusebenza kweNdyebo yoShishino. Iinkonzo zikanondyebo weshishini. Inkcazo yeNdyebo yeNkampani Ezi ziinkampani eziphethe… Funda ngokugqithisileyo
Inkcazelo yeKomishoni yoRhwebo lweLixesha elizayo (CFTC)
Siza kufunda inkcazo yekhomishini yokurhweba kwixesha elizayo, intsingiselo yekhomishini yokurhweba ngexesha elizayo, indlela ikhomishini yokurhweba ngexesha elizayo esebenza ngayo, imimiselo yeCFTC, ukhetho kunye nexesha elizayo, ixesha elizayo kunye nokutshintshwa, isenzo sokutshintshiselana kwempahla, njl. EUnited States, Imakethi yezinto eziphumayo zilawulwa yiarhente ekwinqanaba lomdibaniso likarhulumente ethi… Funda ngokugqithisileyo
Inkcazo yeSalathiso seXabiso loMthengi (CPI)
Kweli phepha lewebhu, Siza kuxoxa, Inkcazo yeSalathiso seXabiso loMthengi (CPI). Luhlobo lwesalathiso apho ixabiso lebhaskithi yempahla kunye neenkonzo lilandelela intuition kumacandelo emarike ebizwa ngokuba yi-Consumer Price Index (okanye i-CPI). Isetyenziswa Njani i-CPI? Ngubani kwaye Yintoni eBandakanya i-CPI? Intsingiselo ye... Funda ngokugqithisileyo
Yintoni iContract for Difference (CFD)
Intshayelelo kwi (CFD) Ukuguquguquka kwexabiso yinto ehlala ichaphazela i-asethi. Singatsho ukuba ikhontrakthi yomahluko (CFD) ichaza ukuba umthengi kufuneka enze ntoni na kuwo nawuphi na umahluko wamaxabiso. Lo mahluko wamaxabiso ungenxa yokuguquguquka kwexabiso le-asethi. Makhe sixoxe nge-CFD Trading, imarike yorhwebo kunye nexabiso lokuthenga. … Funda ngokugqithisileyo
Yintoni i-Collateralized Mortgage Obligation (CMO)
Funda esi sithuba ngononophelo ukuze ufunde ngakumbi malunga: Yintoni i-Collateralized Mortgage Obligation (CMO). Yintoni ekufuneka uyazi malunga neCMO. Ukufana phakathi kweCMO kunye neCDO. Ukuthelekisa kwi-CMO kunye ne-MBS. I-collateralized mortgage obligation (CMO) yingqokelela yeemali-mboleko ezininzi ezipakishwe kunye zathengiswa kubatyali-mali. Ikwaluhlobo... Funda ngokugqithisileyo
Yintoni uMthetho wokuFihla kweBhanki (BSA)?
Kwesi sithuba, Yintoni i-Bank Recrecy Act(BSA)?, besiya kufunda ngoMthetho wokuFihla kweBhanki (BSA), Ukubaluleka koMthetho wokuFihla kweBhanki. Kwaye kwakhona ukuba ukugcwalisa nini iNgxelo yoMsebenzi oSolisayo (SAR), iFomu 8300. Ngo-1970, iUnited States yamisela uMthetho woBufihlo beBhanki (BSA) ukuthintela abaphuli-mthetho ekufihleni okanye ekurhwebeni kwabo ... Funda ngokugqithisileyo
Intsingiselo yesiBonelelo seTyala eliQhelekileyo
Kwesi sithuba Intsingiselo yeMboleko yeTyala eliQhelekileyo, siza kujonga kwi-Collateralized Debt Obligation (CDO), iiNkqubo zeCDO, uLwakhiwo lweCDO, kunye nokunye okuninzi kwi-CDO A i-collateralized obligation (CDO) yipakethi yeemali-mboleko kunye neempahla ezithengiswa kumakhulu. iifemu zotyalo-mali ezinemali eninzi. UDrexel Burnham Lambert, utyalo-mali lwangaphambili… Funda ngokugqithisileyo
iindidi Cryptocurrency, Imibuzo Ebuzwa Rhoqo-FAQs, Utyalo-mali kunye noRhwebo
Iyintoni intsingiselo yokuSebenza ngokuSebenzisa kweNkunzi
Kweli phepha lewebhu, siza kuxoxa ukuba Iyintoni intsingiselo yokuSebenza kweNkunzi Umlinganiselo owahlula ukuba yimalini echithwa yinkampani ekwandiseni ingeniso kunye nokuba ifumana malini kwingeniso ibizwa ngokuba yiCapital performance. Ukubaluleka kokuSebenza kakuhle kweNkunzi kuqaliso. Ixabiso leNkunzi yokuSebenza kweNkunzi yeNkunzi Ngokwesiseko, umlinganiselo ... Funda ngokugqithisileyo
Iyintoni intsingiselo yeXabiso loBizo
Kweli phepha lewebhu, siza kuxoxa ukuba Iyintoni intsingiselo yeXabiso loBizo. Ixabiso lebhidi lichazwa njengexabiso umntu azimisele ukulihlawulela isibambiso, i-asethi, imveliso, inkonzo, okanye isivumelwano. Iindidi zeeBid Price. Indlela yokuqonda amaxabiso eBhidi. Yeyiphi iMizekeliso yeXabiso leBid Inkcazo yeXabiso loBizo… Funda ngokugqithisileyo
Iyintoni intsingiselo yeeNgxowa-mali eziyiNkunzi?
Kweli nqaku, siza kuxoxa ngesihloko esithi "Iyintoni intsingiselo yeeNgxowa-mali zeNkunzi?", Kwakhona, siza kuthetha "ngeNgxowa-mali eyiNkunzi", "Inkcazo yemali eyinkunzi", "Iindleko zenkxaso-mali", "Imizekelo inkxaso-mali eyinkunzi”, njl. njl. Isishwankathelo seeNgxowa-mali zeNkunzi Ukuvavanya amandla enkampani, amatyala ayo kunye nokulingana kwabanini-zabelo kuyajongwa kwakhona. Okwangoku, kunye… Funda ngokugqithisileyo
Inkcazo yoMphathi weBag kwiCrypto kunye noTyalo-mali
Kule post, siza kuxubusha ngesihloko esithi, "Inkcazo yomnini wesikhwama kwi-crypto kunye notyalo-mali". Siza kujonga kwakhona, "Ngubani uMphathi weBag", "Yintoni echaphazela abaphethe iibhegi", "Ilahleko yokuLahleka kunye neMpembelelo yeSimo ". Eminye imixholo ebalulekileyo efana “neendleko ezitshisiweyo” ziya kuxoxwa njengoko siqhubeka. Ngubani Umxhasi? … Funda ngokugqithisileyo
iindidi Cryptocurrency, Ibhola ekhatywayo/i-Soccer Academy Scholarships, Utyalo-mali kunye noRhwebo
Inkcazelo yeBhanki yokuHlaliswa kwaMazwe ngaMazwe (BIS)
Kweli phepha lewebhu, siza kuxoxa ngeDefinition of Bank for International Settlements (BIS). I-BIS liqumrhu lezezimali lamazwe ngamazwe elikhuthaza uzinzo lwemali yehlabathi. Iinjongo zeBhanki zokuhlaliswa kwamazwe ngamazwe. Inguqulelo yeFintech yeBhanki yokuHlaliswa kwaMazwe ngaMazwe (BIS) Liqumrhu lamazwe ngamazwe elinenjongo esisiseko yokuqhubela phambili ihlabathi… Funda ngokugqithisileyo
Inkcazelo yoMenzi weMarike oZisebenzelayo (AMM)
Kule nqaku, eyona nto sigxininise ngayo kwinkcazo ye-automated market maker (AMM). Nangona kunjalo, siza kuphinda sijonge intsingiselo yemali yokuhlawula amatyala, ababoneleli bemali yokuhlawula amatyala, ifomyula yeemveliso ezizinzileyo, ukwahluka kwabenzi borhwebo oluzenzekelayo, ilahleko engapheliyo, njalo njalo. I... Funda ngokugqithisileyo
Inkcazelo ye-Arhente yoQoqosho eZimeleyo (AEA)
Inkcazo yeearhente zoqoqosho ezizimeleyo, intsingiselo yee-AEAs, isakhelo se-AEA, Isakhelo samva nje sikhutshiwe kunye nokunye okuninzi. I-arhente ehlakaniphile yi-Fetch.ai kunye ne-IOTA isiseko esenza izigqibo egameni lomnini wayo ngenjongo yokuzuza kwezoqoqosho, kwaye ikhululekile kwimpembelelo yangaphandle. I-Arhente yoQoqosho eZimeleyo (AEA) Idatha yexesha lokwenyani isetyenziwe kunye namanyathelo athathiweyo xa ... Funda ngokugqithisileyo
Inkcazelo yoKhuseleko lweMali yoBusuku (SOFR)
Apha, uya kufumana konke okufuneka ukwazi malunga neNgcaciso yeNqanaba leMali eKhuselekileyo yoBusuku (SOFR). Inkcazelo yeNkalo yeMali yoBusuku obuKhuselweyo (i-SOFR) yoDidi lwe-recap ye-Secured overnight Financing Rate yangasemva. Imiba edlulayo yeRate yeMali eKhuselweyo kunye nokunye. Inkcazelo ye-SOFR (Ixabiso leMali eKhuselweyo ngobusuku)? Lo ngumgaqo we… Funda ngokugqithisileyo
Inkcazo yeNtlawulo yoMngcipheko kuTyalo-mali
Olu luhlobo lwembuyekezo yotyalo-mali apho i-asethi kulindeleke ukuba ivelise ingeniso engaphaya komlinganiselo wembuyekezo engenamngcipheko. Iprimiyamu yomngcipheko we-asethi luhlobo nje lwembuyekezo kubatyali-zimali. Inkcazo yeNtlawulo yoMngcipheko kuTyalo-mali, uMzekelo weNtlawulo yoMngcipheko, usetyenziso lweNtlawulo yoMngcipheko kwiMali. Imele intlawulo kubatyali-mali ngokunyamezela umngcipheko owongezelelweyo kutyalo-mali olunikiweyo ngaphezulu koko ... Funda ngokugqithisileyo
iindidi Utyalo-mali kunye noRhwebo
NGAWAPHI AMAQHINGA ABONA OMSEBENZI WOKUTHENGISA IBHERE?
Ixesha lokuthengisa ibhere liyingozi. Kweli nqaku, siza kugxininisa, zeziphi izicwangciso ezifanelekileyo zemarike yeebhere, umzekelo, gcina uloyiko lwakho phantsi kolawulo, ukwakha ngexabiso le-dollar eliphakathi, ukudlala ufile, ukuhlukahluka kunye nokunye. Imakethi yeebhere ibhekisa ekuthotyweni okukhulu kwamaxabiso e-asethi okungenani ngama-20%… Funda ngokugqithisileyo
INGCACISO YEZIKHUSELEKO EZIXHASIWE NGEMALI YOKUBAMBISANA (CMBS).
Kweli nqaku, inkcazo yorhwebo-backed securities (CMBS) kunye nendlela esebenza ngayo, iindlela zorhwebo mortgage-backed securities umsebenzi, iintlobo CMBS, ukuchaswa kwe-CMBS kunye nokufaneleka kwe-CMBS kuya kugxininiswa. Ziimveliso zotyalo-mali ezinengeniso esisigxina ezixhaswa ngemali yokubambisa kwiipropati zorhwebo endaweni yendawo yokuhlala. I-CMBS inokubonelela ngemali yokwenyani… Funda ngokugqithisileyo
LWEYILUPHI Olona TYALO-MALI LULULONA LULUNENZUZO KWIINTSAPHO ZOMkhosi?
Injongo yeli nqaku, kukuqaqambisa; zeziphi ezona zilungileyo kwaye zineNZUZO UTYALO-MALI LWEENTSAPHO ZOMkhosi. Njengesicwangciso se-Federal thrift, i-akhawunti yomhlalaphantsi yomntu ngamnye (IRAs), izicwangciso zokonga iikholeji ezingama-529, inkqubo yokugcina imali kunye nokunye. Inkonzo yasemkhosini ayiniki xesha lininzi lasimahla elinokwenza ukuba ilungu liphande kwaye likhethe olona tyalo-mali lungcono. Kodwa kukho… Funda ngokugqithisileyo
UKWAHLUKANA PHAKATHI KWESTOCK ESIKHETHAYO KUNYE NEEZIQHELEKILEYO
Kweli nqaku, siya KUHLUKANA PHAKATHI KWE-STOCK ESIKHETHAYO KUNYE NE-COMMON STOCK, isitokhwe esikhethiweyo kunye nokwahlula isitokhwe esikhethiweyo kwisitokhwe esiqhelekileyo, siya kugxininiswa. Isitokhwe esithandwayo kunye nesitokhwe esiqhelekileyo sahluliwe ngeendlela ezininzi. Umahluko omkhulu kukuba isitokhwe esikhethiweyo asiniki malungelo okuvota kubaninizabelo, ngelixa isitokhwe esiqhelekileyo senza. Abatyali-zimali… Funda ngokugqithisileyo
Inkcazo yeClearinghouse kwiBhanki kunye nendlela esebenza ngayo (Imizekelo yeClearinghouse)
I-Financial Clearinghouse sisihloko esibalulekileyo kwi-stock market kuba basebenza njenge-middleman. Ngokufunda esi sithuba, awuyi kuqonda kuphela ingqikelelo yendlu yokucoca ngokwezemali kodwa uya kwazi neentlobo zezindlu zokucoca zemali ezifana; IFutures Exchanges Clearinghouses, kunye neStock Market Clearinghouses. Sizakuxoxa kwakhona nge… Funda ngokugqithisileyo
iindidi Ibhola ekhatywayo/i-Soccer Academy Scholarships, Utyalo-mali kunye noRhwebo, Akohlulwanga
INGCACISO YOTYALO-MALI LWENKUNZI
Kweli nqaku, siza kuhamba nawe, INGCACISO YOTYALO-MALI LWENKUNZI, iindlela ezisebenza ngayo utyalo-mali kwinkunzi, izinto ezibalulekileyo eziqwalaselwayo kunye nokusilela kutyalo-mali kwinkunzi. Oku kunokuchazwa njengokufumana izinto eziphathekayo yinkampani ukuze zisetyenziswe ekukhuthazeni iinjongo nenjongo zayo zexesha elide. Ii-asethi ezithengwa njengotyalo-mali olukhulu zibandakanya: Izindlu ezithengiswayo, ... Funda ngokugqithisileyo
Inkcazo yesivuno sepesenti yoNyaka (APY)
Ngaba unomdla wokwazi ngakumbi ngepesenti yoNyaka yeSivuno? Jonga iNgcaciso yePercentage Yield yoNyaka (APY). Ifomula ye-APY. Umahluko phakathi kwe-APY kunye ne-APR. Ithini i-APY. Kwaye umzekelo we-APY. Thatha esi siqwenga njengesikhokelo. Ipesenti yesivuno sonyaka (APY) lizinga lembuyekezo kutyalo-mali oluthile ngaphezulu… Funda ngokugqithisileyo
Zeziphi ezona zicwangciso-qhinga zilungileyo kwiMarike yeBull
Ukuba ukhe wazibuza ukuba yintoni imarike yenkomo; Imarike yeBull ibhekisa kwimeko apho amaxabiso enyuka okanye kulindeleke ukuba anyuke kwimarike yezemali. Igama elithi "imarike yenkomo" lidla ngokunxulunyaniswa ne-stock market kodwa linokusetyenziswa kuyo nayiphi na into ethengisiweyo, kuquka i-real estate, iibhondi, iimali kunye neemveliso. Zeziphi ezona zicwangciso-qhinga zilungileyo kwimarike yenkunzi, iiMpawu zentengiso yenkunzi yenkomo, Indlela yokuxhamla kwimarike yenkomo, Ukuthelekisa phakathi kwemarike yenkomo kunye nemarike yebhere? … Funda ngokugqithisileyo
Zeziphi Ezona zibonelelo zilungileyo zokuphucula ulwazi lwezeMali
Ucinga ukuba yeyiphi eyona ndlela yokuphucula ulwazi lwakho lwezezimali? Nokuba uhlala kubuchule bokukhusela irhafu, iindlela zotyalo-mali ezicokisekileyo, okanye unobunzima bokuhlula ii-ETF kwi-HSAs, kuyafuneka ukuba nobabini nifunde iziseko kwaye nizazi izibonelelo ezinokukunceda wenze uqingqo-mali ngolwazi oluluncedo kakhulu. Zeziphi ezona zixhobo zilungileyo zokuphucula… Funda ngokugqithisileyo
Umahluko kunye neNkcazo yeAkhawunti yoRhwebo kunye ne-IRA.
Kukho izihloko eziphambili esiza kugxila kuzo xa sixoxa ngesihloko: Umahluko kunye neNkcazo yeAkhawunti ye-Brokerage kunye ne-IRA. Ezi zihloko ziphambili zezi Brokerage kunye ne-IRA Overview, Intsingiselo yeAkhawunti yoRhwebo, Yintoni i-IRA, iRhafu yoRhwebo kunye neeAkhawunti ze-IR, iiRhafu zeAkhawunti yoRhwebo, iiRhafu zeAkhawunti ye-IR, njl. Xa isiza ... Funda ngokugqithisileyo
Zeziphi Abona bathengisi beGolide abakwi-Intanethi kuTyalo-mali lweGolide
Ukulandela ukwanda kokuguquguquka kwemarike yemasheya kunye nokungaqiniseki kwezopolitiko. Inani elilungileyo labatyali-mali liyahlukana ukuya kwiintsimbi ezixabisekileyo njengendlela yokwandisa iipotifoliyo zabo zotyalo-mali. Ngokukodwa, iGolide yaligcina ixabiso layo nangexesha lokuguquguquka okuphawulekayo kwemarike yemasheya. Kubonakaliswe ukuba luthango olusebenzayo ngokuchasene nokunyuka kwamaxabiso. Ngabaphi abona bathengisi beGolide bakwi-Intanethi… Funda ngokugqithisileyo
Isoftware yoCwangciso oluPhezulu yeePropati eziRentwayo kunye nendlela yokukhetha esona sixhobo silungileyo sokulawula iiRenti zakho
Ukugcina irekhodi yezinto zemihla ngemihla, iirisithi zokulandelela, ukudala iingxelo, kunye nokulungiselela ixesha lerhafu ngemizuzu endaweni yeeyure (okanye iintsuku) ziye zafezekiswa ngokubhekisele kwi-software yeepropati ezirentwayo. Isoftware yoBalo-mali ePhezulu yeePropati zokuRenta kunye nendlela yokukhetha esona sixhobo silungileyo sokulawula iiRenti zakho, Yintoni i-Akhawuntingi yeSoftware yokuRenta… Funda ngokugqithisileyo
Uthini Umahluko phakathi kwabaTyali-mali bamaZiko kunye nabaTyali-mali abaThengisayo
Ngeenjongo ezahlukeneyo, uTyalo mali luhlala lutsala iintlobo ezahlukeneyo zabatyali-mali. Iindidi eziphambili zabatyali-mali ngabatyali-mali beziko kunye nabatyali-mali abathengisayo. Uthini Umahluko phakathi kwabaTyali-mali bamaZiko kunye nabaTyali-mali abaThengisayo, Ngoobani abatyali-zimali bamaziko? Ngoobani abatyali zimali? Iindidi zabatyali-zimali bamaziko Uthelekiso phakathi kwabaTyali-mali bamaZiko kunye nabaTyali-mali abaThengisayo Umtyali-zimali weziko usebenza nenkampani okanye umbutho onabasebenzi abatyala imali egameni labanye abantu. (ngokuqhelekileyo, ezinye iinkampani kunye nemibutho). Inkqubo apho umtyali-zimali weziko abela imali eyinkunzi. Oko kuza kutyalwa kuxhomekeke kwiinjongo zenkampani okanye imibutho eyimeleyo. Zimbalwa iindidi ezaziwayo-kakhulu zabatyali-zimali bamaziko ziingxowa-mali zomhlalaphantsi, iibhanki, iingxowa-mali ezihlangeneyo, iingxowa-mali zeheji, iimali, kunye neenkampani zeinshorensi. Ngelixa, abatyali-zimali abathengisayo babandakanya abantu abatyala imali yabo eyinkunzi, ngokwesiqhelo egameni labo. Ukuthetha ngokunyanisekileyo, umahluko obalulekileyo phakathi komtyali-zimali weziko kunye nomtyali-mali othengisayo. Kuxhomekeke kumlinganiselo worhwebo ngalunye. Iindleko apho… Funda ngokugqithisileyo
Yintoni Umahluko phakathi koQoqosho lweMarike kunye noQoqosho loMyalelo
Kwisithuba somsebenzi wezoqoqosho, uqoqosho lweMarike kunye noQoqosho lomyalelo lumele uqoqosho lwemalike ezimbini ezinkulu. Yintoni uqoqosho lwemarike, Yintoni uqoqosho lomyalelo, Yintoni Umahluko phakathi koQoqosho lweMarike kunye noQoqosho lomyalelo? Uthelekiso phakathi koQoqosho lweMarike kunye noQoqosho loMyalelo Owona mahluko mkhulu ulele kwizinto zemveliso kunye… Funda ngokugqithisileyo
UTyala Njani kwiiNgxowa-mali zeSalathiso kunye neZibonelelo zayo
Eyona njongo yeli nqaku kukukhokela malunga nendlela yokutyala imali kwisalathiso seemali kunye nezibonelelo zayo. Iza kukukhokela kwimingeni yemali yesalathiso, uncedo lwemali yesalathiso, ushwankathelo lweengxowa-mali zesalathiso, i-bio emfutshane kaWarren Buffett, njl. Xa uxoxa malunga notyalo-mali, kukho abantu abathile abathi ... Funda ngokugqithisileyo
Eyona ndlela ineNzuzo yokuTyala imali kwi-Intanethi
Xa sibhala eli nqaku, sinethemba lokuba siya kuba nefuthe kulwazi lweyona ndlela inenzuzo yokwenza imali kwi-intanethi kuwe. Kwakhona, ukhetho lomthengisi we-intanethi, iintlobo zee-odolo eziqhelekileyo, uphando lotyalo-mali kwi-intanethi, ukuqinisekiswa kwezinto ezimbini. Ngoku masiqale. Kutshanje, kuye kwakho isixa esigqithisileyo sokurhweba kwi-intanethi. Oku kwenza kube nzima uku… Funda ngokugqithisileyo
Inkcazo yexabiso langaphakathi elilungisiweyo lokuBuyisa (i-MIRR) kunye nendlela esebenza ngayo
Qonda ngakumbi malunga nenkcazo ye-MIRR, kunye nefomula yokubala i-MIRR. Ingaba isebenza kanjani. Ithini iMIRR. Umahluko phakathi kwe-MIRR kunye ne-IRR. Ingaba iReyithi yembuyekezo eLungisiweyo ithetha ukuthini? I-MIRR yinguqulelo etshintshiweyo yereyithi yembuyekezo yangaphakathi (IRR), eqikelela ireyithi yotyalo-mali ngokutsha kunye neeakhawunti… Funda ngokugqithisileyo
Zeziphi ezona zifundo zilungileyo zoTyalo-mali lweRhafu?
Izatifikethi zokuhlawulela irhafu zii-asethi apho ufumana khona iphepha-mvume elibuyisela irhafu esele ihlawulwe ngokubuyisela imali, Izatifikethi zeRhafu yerhafu yindlela eyoyikisayo yokuba abatyali-mali bavelise imveliso engcono kwindawo enenzala ephantsi, utitshala wekhosi yotyalo-mali kwiRhafu. indlela esebenza ngayo inkqubo, yintoni eyenza utyalo-mali oluhlakaniphile, kwaye ... Funda ngokugqithisileyo
Eyona 21 yeWebhusayithi yokuThengisa iMpahla kunye neMpahla.
Ukuba ukwiphulo lokwenza imali eyongezelelweyo ngokuthengisa ezinye zezinto zakho, usenako ukunikela ngazo. Nokuba imeko ithini na, unokonga ngokwenene imali kwaye wenze intshukumo efikelelekayo. Nazi iiwebhusayithi ezinkulu ezingama-21 kunye nee -apps oya kuthengisa izinto zakho ezingafunekiyo ekuhlaleni. 1. Uluhlu lweCraigs: Ngaphambi nje kwe-eBay, iCraigslist ... Funda ngokugqithisileyo
Inkcazo yexabiso lepesenti yoNyaka (APR) kwi-Crypto
Yintoni ipesenti yoNyaka (APR); Le yimali yenzala lowo ubolekayo kufuneka ayihlawule ngonyaka ngamnye. Umbuzo ophambili apha yindlela yokubala i-APR? singakwenza oko ngokuphinda-phinda inzala ngamaxesha athile ngenani lamathuba kunyaka wokusetyenziswa kwayo. Umyinge wepesenti wonyaka (APR) yohluka kunyaka… Funda ngokugqithisileyo
Ezona ndlela zilula zokuDlulisela iVisa ikhadi lesipho kwiakhawunti yebhanki ngexesha elifutshane
Ngaba ubuza ezona ndlela ziLula kakhulu zokuDlulisela iVisa ikhadi lesipho kwiakhawunti yeBhanki ngexesha elifutshane? Jonga impendulo kolu lwazi lunikwe ngezantsi. Uninzi lwabantu lufumene ukuhanjiswa kwamakhadi esipho se-visa kwiibhanki kulucelomngeni kakhulu kwaye akufikeleli kwabanye abantu. Izibonelelo zamakhadi e-visa azinakugxininiswa ngaphezulu, ... Funda ngokugqithisileyo
Inkcazo yoMvuzo weNcwadi kunye noSetyenziso lwetyala (uMvuzo wencwadi kunye nomvuzo orhafiswayo)
Yintoni iNgeniso yeNcwadi? Ingeniso yemali yenkampani phambi kokuba irhafu ithathelwe ingqalelo ibizwa ngokuba yingeniso yencwadi. (I-GAAP) ngumgaqo-nkqubo wobalo-mali owamkelweyo jikelele, ingxelo yequmrhu inika abalawuli bezemali, abanini-zabelo, okanye abatyali-mali kwingxelo yemali. Ingeniso yenkampani ecuthiweyo ngerhafu ngamanye amaxesha inokubhekiswa kuyo enokunxulunyaniswa ... Funda ngokugqithisileyo
Iyintoni intsingiselo yeBid-Ask Spread?
Ngaphambi kokuba singene kwiinkcukacha, masicacise ngokukhawuleza ukuba yintoni i-Bid-Ask Spread. Ukwazi Bid-Buza Ukusasazeka. Ubudlelwane phakathi kweBid-Ask Spread and Liquidity. I-Bid-Buza iSasazo seMicimbi. Sithini Isizathu Sokusasazwa kweBid-Ask?. Ingaba iBid-Ask Spreading ijongeka njani kwiiStokhwe? Ibhidi-Buza Ukusasazwa kweNkcazelo Isixa-mali apho ... Funda ngokugqithisileyo
Yintoni esebenzayo iNzala yoNyaka (imizekelo kunye nendlela yokubala ireyithi elinganayo yoNyaka)
Landela inkqubo engaguqukiyo yokunyuka usehla kwesi sihloko. Ukwenza isigqibo sokuba eli nqaku liya kuba yingenelo ekufundeni nasekuqondeni kwakho. Ukubalwa njani umlinganiselo wenzala wonyaka osebenzayo (EAR). Inkcazo yomlinganiselo wenzala wonyaka osebenzayo. ukuqaphela izinga lenzala elisebenzayo ngonyaka. Inkcazo yoMyinge weNzala oMiselweyo. Umdla kuzo zombini ezizibizo nezisebenzayo I… Funda ngokugqithisileyo
Isikhokelo sendlela yokugcwalisa itshekhi
Eli nqaku lenzelwe ukukwazisa ukuba yintoni iTshekhi, Ngubani onokuba netshekhi, Indlela yokubhala itshekhi, njl njl. indlela yokugcwalisa itshekhi. Uninzi lwabantu abane… Funda ngokugqithisileyo
Iyintoni intsingiselo yee-asethi eziphantsi kolawulo (AUA)
Ii-asethi eziphantsi kolawulo zinokuchazwa njengomlinganiselo opheleleyo wee-asethi apho iziko lezemali liya kuxhobisa ngeenkonzo zolawulo ngaloo ndlela lihlawulisa umrhumo ngomsebenzi owenziweyo. Iyintoni intsingiselo yee-asethi eziphantsi kolawulo (AUA)? Ukuthelekisa phakathi kwe-AUA kunye ne-AUM. Uluhlu lwabaBoneleli beAsethi phantsi kolawulo Ezi asethi ziphantsi kolawulo zihlala ziphantsi kolawulo oluluncedo kwaye ngokuhambelanayo zilawulwa ... Funda ngokugqithisileyo
INGCACISO YEJARIDA YORHWEBO
Kweli phepha lewebhu, siza kukunika INGCACISO epheleleyo YEENKONZO ZOKURHWEBA KUNYE INDLELA YOKUSEBENZA AMATYALA, I-ADVANTAGEMENT JOURNAL YORHWEBO, INDLELA YOKUGCINA IJOURNAL YORHWEBO, IZINTO EZIBALULEKILEYO UKUZONGEZA KWINCWADI YORHWEBO, IINDLELA ZOKUYENZA. IJWANDI? Akukho ndlela ilula yokuphulukana nemali ngelixa… Funda ngokugqithisileyo
UngaSombulula njani kwaye ulawule iWalmart ngeKhadi lokuNgena ngetyala kunye neNtlawulo yeBhili
Ukungena ngekhadi letyala leWalmart liphepha apho ungangenisa khona iinkcukacha zokungena kwiakhawunti yakho yeWalmart ukuze ukwazi ukufikelela kwiakhawunti yakho. Oku kubizwa ngokuba luphawu lokhuseleko olunceda ukukhusela iiakhawunti zamalungu. Ngokubanzi, unokulawula iakhawunti yakho yetyala kwaye uhlawule umvuzo wekhadi lakho leWalmart… Funda ngokugqithisileyo
Iyintoni intsingiselo yeLedger yoBungqina
Uqale ishishini kwaye ufuna into yokukunceda ulandelele yonke into. Nceda ufunde oku kulandelayo: Ithini Intsingiselo Yeleja yoBungqina. INkcazelo yeLedger yoBungqina. INJONGO yeLedger yoBungqina. Ileja yobungqina beCryptoglossary. Inkcazo yeleja yobungqina. Ileja yobungqina yincwadi yeeakhawunti esebenza njengobungqina… Funda ngokugqithisileyo
Unokwenza njani i-100 yeedola ngokutyala imali eyi-$ 1,000 ngosuku.
Kweli phepha lewebhu, ndiza kukubonisa indlela ongayenza ngayo i-100 yeedola ngokutyala imali eyi-1,000 yeedola ngosuku. Siza kuphinda sixoxe malunga nezinto eziqhelekileyo kuninzi lwabarhwebi abaphumeleleyo, ulwazi lweSicwangciso soRhwebo, Ndingenza njani ukuba iSicwangciso sam sokuRhweba siphumelele? Iindleko zabacebisi beRobo? Thina… Funda ngokugqithisileyo
Inkcazo yoTyalo-mali lweNkunzi kunye nezinto eziluncedo nezingeloncedo
Yintoni i-Capital Investment? Utyalo-mali oluyinkunzi yenkampani kukuthengwa kwezinto eziphathekayo ngenjongo yokufezekisa iinjongo zoshishino zexesha elide kunye neenjongo. Ii-asethi ezifunyenwe njengotyalo-mali olukhulu zibandakanya izindlu nomhlaba, izakhiwo zokuvelisa, kunye noomatshini. Iimali ezisetyenzisiweyo zinokuvela kwiindawo ngeendawo, kubandakanywa iimali-mboleko zebhanki eziqhelekileyo kunye nezivumelwano ze-venture capital. … Funda ngokugqithisileyo
UNGABHALISA NJANI NOKUNGENA NGEKHADI LE-WALMART CREDIT KWI-AKHAWUNTI YE-Intanethi.
Kweli nqaku, uya kufumanisa ukuba yintoni na i-credit card ye-Walmart kwaye UNGANGENA KANJANI IKHADI LE-WALMART CREDIT ACCOUNT ONLINE, IINZUZO ZE-WALMART CREDIT IKHADI, UNGABHALISA KANJANI I-WALMART'S ONLINE BANKING, YINTONI IINDLEKO YOKUFUMANA I-WALMART CREDIT IKHADI? I-WWW.WALMART.COM Ikhadi letyala leWalmart lilungele abantu… Funda ngokugqithisileyo
Iinyani malunga ne-Amazon Storefront
Ivenkile ye-Amazon yasungulwa ngoSeptemba 2018 ukwenzela ukubonelela ngendlela yamashishini amancinci naphakathi ukuba athengise iimveliso ngokuthe ngqo kwi-Amazon. Yintoni ivenkile yeAmazon? Iindleko zevenkile yeAmazon, amanyathelo okuseta indawo yangaphambili yevenkile yaseAmazon Ungathenga njani kwindawo engaphambili yevenkile yaseAmazon kunye nendlela yokufumana… Funda ngokugqithisileyo
iindidi Ibhola ekhatywayo/i-Soccer Academy Scholarships, Utyalo-mali kunye noRhwebo, imisebenzi
Ngubani uMtyali-mali weZiko?
Siza kufunda "Ngubani uMtyalomali weZiko?". Kwakhona, funda i-Institutional Investor, iifom zomtyali-mali weziko, iingozi zotyalo-mali lweziko, abaTyali-mali bamaZiko vs abaTyali-mali abaThengisayo: Umahluko phakathi kwabo. Isihloko sithetha ngentsebenziswano okanye iqumrhu elisemthethweni elirhweba kwimarike endaweni yabathengi babo abanokuba ngabatyalo-mali abathengisayo. Sibhekisa kwi… Funda ngokugqithisileyo
Ungazibandakanya njani ne-Atlético Ottawa FC Youth Academy
Kule post "Indlela yokujoyina i-Atlético Ottawa FC Youth Academy", uya kuyazi imfuneko yokungena kwi-Atlético Ottawa FC Academy, i-Atlético Ottawa FC Stadium, uMongameli we-Atlético Ottawa FC, kunye nokunye okuninzi. IAkhademi yoLutsha ye-Atlético Ottawa FC ye-Atlético Ottawa FC yeCandelo loLutsha izinikele ekuphuhliseni isivuno sekamva le… Funda ngokugqithisileyo
iindidi Ibhola ekhatywayo / iziko lebhola ekhatywayo eCanada, Ibhola ekhatywayo/i-Soccer Academy Scholarships
Ungajoyina njani iPacific Football Academy
Kule post "Indlela yokujoyina i-Pacific Football Academy", uya kwazi iMfuneko yokungena kwi-Pacific FC Academy, i-Pacific FC tryouts, i-Pacific FC Stadium, i-CEO ye-Pacific FC, kunye nokunye okuninzi. Inkqubo yoLutsha yePacific FC iPhiko loLutsha lePacific FC lizinikele ekuphuhliseni isivuno sekamva labadlali. Ukufundisa abantwana,… Funda ngokugqithisileyo
Uzimanya njani neFK Radnik Surdulica Football Academy
Kule post "Indlela yokujoyina i-FK Radnik Surdulica Football Academy", uya kuyazi iMfuneko yokuNgena kwi-FK Radnik Surdulica Academy, FK Radnik Surdulica FC, Serbian SuperLiga, FK Radnik Surdulica player, kunye nokunye okuninzi. I-FK Radnik Surdulica FC Youth Academy ye-FK Radnik Surdulica yePhiko loLutsha lizinikele ekuphuhliseni amaza ekamva… Funda ngokugqithisileyo
iindidi Ibhola ekhatywayo / iZikolo zeSoka eBosnia naseHerzegovina, Ibhola ekhatywayo/i-Soccer Academy Scholarships
Ngaba ungumdlali omncinci onomdla kwiBhola yaseBosnia? Esi sithuba "FK Sloboda Tuzla FC" siya kuba luncedo. Kwakhona bona iMfuneko yokuNgena FK Sloboda, FK Sloboda Tuzla FC, FK Sloboda Tuzla FC Stadium, FK Sloboda Tuzla Fc Head Coach. I-FK Sloboda Tuzla FC: I-Academy yoLutsha ye-FK Sloboda Tuzla yePhiko loLutsha lizinikele ekuphuhliseni… Funda ngokugqithisileyo
Ungajoyina njani iFlamengo RJ Football Academy
Kule post "Indlela yokujoyina iFlamengo RJ Football Academy", uya kukwazi malunga nemfuneko yokungena kwiFlamengo RJ Fc Academy, iFlamengo RJ Youth Academy Stadium, iNinho do Urubu, iFlamengo RJ Fc Stadium kunye nezinye ezininzi. I-Flamengo Youth Academy's Clube de Regatas IClube de Regatas do Flamengo Youth Academy (isiPhuthukezi saseBrazil: Iindidi … Funda ngokugqithisileyo
iindidi Ibhola ekhatywayo / iziko lebhola ekhatywayo eBrazil, Ibhola ekhatywayo/i-Soccer Academy Scholarships
Ukujoyina iJuventude FC Academy
Ngaba ujonge ukujoyina iAkhademi eBrazil? Uya kufumana esi sithuba "Ukujoyina iJuventude FC Academy" iluncedo. Khangela kwakhona ukungena kwiRequirement Juventude Academy, Indlela yokujoyina iJuventude Youth Academy, iJuventude FC, kunye neJuventude Fc Stadium. IJuventude FC: Iphiko loLutsha leAkhademi yeJuventude lizinikele ekuphuhliseni isizukulwana seengcali ezizayo. … Funda ngokugqithisileyo
I-Ceara Football Academy
Ngaba uyafuna ukudlalela iAkhademi yaseBrazil? Esi sithuba "I-Ceara Football Academy" yindawo efanelekileyo yokuqala. Kwakhona khangela ukungena kwiMfuneko ye-Ceara Academy, i-Ceara FC, i-Ceara FC League, kunye ne-Ceara Fc Head Coach. I-Ceara FC: Iphiko loLutsha leAkhademi ye-Ceara lizinikele ekuphuhliseni isizukulwana seengcali ezizayo. … Funda ngokugqithisileyo
Imfuneko yokuBhalisa kwiZiko loLutsha laseCoritiba FC
Kwesi sithuba “IMfuneko yokuBhalisa kwiZiko loLutsha laseCoritiba FC”, uya kwazi malunga nemfuneko yokungena kwiCoritiba Fc Academy, uMqeqeshi oyiNtloko uCoritiba Fc, iCoritiba Fc Stadium, kunye nezinye ezininzi. Inkqubo yoPhuhliso loLutsha eCoritiba Coritiba Football Academy Izakhono zamaqela olutsha zezona ziqwengana zibalulekileyo zeklabhu yebhola ekhatywayo. Ukuba... Funda ngokugqithisileyo
iindidi Ibhola ekhatywayo / iziko lebhola ekhatywayo eBrazil
Uzimanya njani neGoiás Esporte Clube Football Academy
Kule post "Indlela yokujoyina iGoiás Esporte Clube Football Academy", uya kuyazi imfuneko yokungena kwiGoias Fc Academy, iGoias Fc Manager, Goias Fc Stadium kunye nokunye okuninzi. I-Goias FC yoLutsha yeAkhademi Iphiko loLutsha leklabhu lizinikele ekuphuhliseni isivuno sekamva leencutshe eGoiás Esporte Clube. Ukuqeqesha … Funda ngokugqithisileyo
Ukujoyina iForge FC Academy
Ngaba ujonge ukudlala eCanada njengomdlali webhola omncinci? Funda esi sithuba "Ukujoyina iForge FC Academy". Kwakhona khangela i-Enter Requirement Forge FC Academy, umqeqeshi oyintloko we-Forge FC, i-Forge FC Stadium, uSihlalo we-Forge FC. IForge FC: Iphiko loLutsha leAkhademi yeForge FC lizinikele ekuphuhliseni isizukulwana seengcali ezizayo. Nangona kunjalo… Funda ngokugqithisileyo
Iimvavanyo ze-Academy yoLutsha yaseShanghai Shenhua FC
Kule post "iShanghai Shenhua FC Youth Academy Trials", uya kuyazi imfuneko yokubhalisa kwi-Shanghai Shenhua FC Academy, uMphathi we-Shanghai Shenhua FC, i-Shanghai Shenhua FC Stadium, kunye nendlela yokujoyina i-Shanghai Shenhua FC Youth Academy. IAkhademi yoLutsha yaseShanghai Shenhua FC Saseka iziko lethu lebhola ekhatywayo yolutsha eShanghai ngo-2012 ngenxa yokuba ... Funda ngokugqithisileyo
iindidi Ibhola ekhatywayo/ Iziko lebhola ekhatywayo eTshayina, Ibhola ekhatywayo/i-Soccer Academy Scholarships
Ngaba uyafuna ukudlalela iAkhademi eChile? Jonga le post "Universidad de Chile FC Youth Academy". Kwakhona ubone iMfuneko yokuNgena kwi-Universidad de Chile Academy, Universidad de Chile FC Stadium, Universidad de Chile FC Umphathi, Universidad de Chile FC. I-Universidad yaseChile FC: I-Academy yoLutsha yase-Chile FC yoLutsha… Funda ngokugqithisileyo
iindidi Ibhola ekhatywayo / iziko lebhola ekhatywayo eChile, Ibhola ekhatywayo/i-Soccer Academy Scholarships
Igxotha iMagallanes FC yoLutsha loBhaliso kwiZiko loLutsha
Kule post "iDeportes Magallanes FC Youth Registration Requirement", uya kuyazi imfuneko yokungena kwiDeportes Magallanes academy, Deportes Magallanes FC, Chilean Primera división, indlela yokujoyina iDeportes Magallanes academy, kunye nezinye ezininzi. IAkhademi yoLutsha yokugxotha iMagallanes FC Ukuqeqesha abantwana, iklabhu kungoko ichitha imali eninzi… Funda ngokugqithisileyo
Ungajoyina njani iFK Leotar Youth Academy
Kule post "Indlela yokujoyina iFK Leotar Youth Academy", uya kuyazi imfuneko yokungena kwiFK Leotar Academy, FK Leotar FC, FK Leotar FC league, kunye nendlela yokujoyina iFK Leotar Academy kunye nokunye okuninzi. I-FK Leotar Youth Academy ye-FK Leotar yePhiko loLutsha izinikele ekuphuhliseni isivuno sexesha elizayo se… Funda ngokugqithisileyo
Indlela yokujoyina i-NK Široki Brijeg Football Academy
Kule post "Indlela yokujoyina i-NK Široki Brijeg Football Academy", uya kukwazi imfuneko yokungena kwi-NK Široki Brijeg Academy, NK Široki Brijeg FC, NK Široki Brijeg FC Stadium, NK Široki Brijeg FC Manager, kunye nokunye okuninzi. IAkhademi yoLutsha ye-NK Široki Brijeg FC Iphiko loLutsha leklabhu lizinikele ekuphuhliseni… Funda ngokugqithisileyo
Ungajoyina njani i-FK Željezničar Youth Academy
Kwesi sithuba "Usijoyina njani i-FK Željezničar Youth Academy", uya kuyazi imfuneko yokungena kwi-FK Željezničar Academy, FK Željezničar FC, FK Željezničar Stadium, FK Željezničar Manager kunye nokunye okuninzi. I-Željezničar Youth Academy (FK Željezničar) Iphiko loLutsha le-FK Željezničar lizinikele ekuphuhliseni isivuno sexesha elizayo seengcali. Ukuqeqesha abantwana, i… Funda ngokugqithisileyo
Uzimanya njani neReims Fc Academy
Siza kufunda "Indlela yokujoyina iReims Fc Academy". Kwakhona, jonga indlela yokujoyina kwiReims Fc Academy, imfuneko yokuba ungabhalisa njani kwiReims Fc Academy, iklabhu yebhola yeReims, ibala lemidlalo leReims, njl. Intshayelelo yeStade de Reims FC yoLutsha lweAkhademi Ngaba uselula… Funda ngokugqithisileyo
iindidi Ibhola ekhatywayo / iziko lebhola ekhatywayo eFransi, Ibhola ekhatywayo/i-Soccer Academy Scholarships
Uzimanya njani neSampdoria Fc League Academy
Siza kufunda "Indlela yokujoyina iSampdoria Fc League Academy". Kwakhona, funda iSampdoria Academy Players, ukubhaliswa kweSampdoria Academy, iSampdoria Academy Players, ukungena kwiimfuno kwiSampdoria Academy, njl. Ngoku, makhe sixoxe ngendlela yokujoyina iSampdoria Fc League Academy. Malunga neSampdoria Youth Tryouts Iqela lophuhliso lolutsha leSampdoria lenziwe liqela lePrimavera 1. … Funda ngokugqithisileyo
iindidi Ibhola ekhatywayo/i-Soccer Academy Scholarships
Ungajoyina njani i-Espanyol Fc Academy
Siza kuxoxa "Indlela yokujoyina i-Espanyol Fc Academy". Kwakhona, funda imfuno yokungena ukubhalisa kwi-Espanyol Fc Academy, indlela yokujoyina i-Espanyol Fc Academy, i-Espanyol Youth Academy, i-Espanyol Academy Training Ground, njl. Inkqubo yayo yeAcademy yaziwa njenge… Funda ngokugqithisileyo
iindidi Ibhola ekhatywayo / iziko lebhola ekhatywayo eSpain, Ibhola ekhatywayo/i-Soccer Academy Scholarships
Ungajoyina njani iGenoa Fc League Academy
Siza kufunda "Indlela yokujoyina iGenoa Fc League Academy". Emva koko, nxulumanisa izihloko ezifana; indlela yokujoyina iGenoa Fc academy, iGenoa Football Club, imfuneko yokufaka isicelo seGenoa Fc academy, indlela yokujoyina inkampu yasehlotyeni yaseGenoa, njl.njl. Ngobulumko beklabhu, bacinga ngesixhobo esiphakathi ukuzisa abantu abatsha abanomdla webhola ekhatywayo ... Funda ngokugqithisileyo
iindidi Ibhola ekhatywayo / i-Soccer Academy yase-Itali, Ibhola ekhatywayo/i-Soccer Academy Scholarships
Page1 Page2 ... Page29 Okulandelayo →
Ibhola ekhatywayo / iziko lebhola ekhatywayo eFransi
Ibhola ekhatywayo / iZikolo zeSoka eAlgeria
Ibhola ekhatywayo / iZikolo zeSoka eOstreliya
Ibhola ekhatywayo / iziko lebhola ekhatywayo eBelgium
Ibhola ekhatywayo / iZikolo zeSoka eBosnia naseHerzegovina
Ibhola ekhatywayo / iziko lebhola ekhatywayo eBrazil
Ibhola ekhatywayo / iziko lebhola ekhatywayo eCanada
Ibhola ekhatywayo / iziko lebhola ekhatywayo eChile
Ibhola ekhatywayo / iziko lebhola ekhatywayo eNgilani
Ibhola ekhatywayo / iziko lebhola ekhatywayo eSpain
Ibhola ekhatywayo / i-Soccer Academy yase-Itali
Ibhola ekhatywayo/ Iziko lebhola ekhatywayo eTshayina
Imibuzo ebuzwa rhoqo-ii-FAQs
© 2022 Soccerspen • Yakhiwe nge GeneratePress